Shirar ka kala Socda Magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Shirar ka kala Socda Magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb
Shirar ka kala Socda Magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb
June 25, 2019 - By: HORSEED STAFF
Magaaladda Cadaado waxaa xalay gaaray madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle xaaf iyo wafti uu hoggaaminayo oo labo maalmood ka guuray magaaladda Dhuusamareeb oo xarun u ahayd maamulkiisa.
Ra’isul wasaaraha xukuumadda Federaalka Xasan cali khayre iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa shalay gaaray magaaladda Dhuusamareeb, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo madaxda ururka Ahlu Sunna ee ka taliya degaankaasi.
Madaxweyne Xaaf waxaa uu kulamo la yeeshay Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo deegaan ahaan ka soo jeeda degmada Cadaado, kuwaasoo si diiran ugu ku soo dhaweeyay magaaladda, islamarkaana dejiyay madaxtooyada .
Dhinaca kale, Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ay wehliyaan Wasiirrada Amniga gudaha, Boostada iyo kalluumaysiga ayaa kulamo la qaatay madaxa Ahlu sunna Sheekh Shaakir iyo qaar ka mid ah odoyaasha degaanka.
Kullamada ka kala socda Cadaado iyo dhuusamareeb ayaa la kala xiriira doorashada madaxweynaha Galmudug oo loo ballansan yahay 4 July 2019. Dowladda federaalka ayaa doonaysa in doorashada lagu qabto Dhuusamareeb, halka madaxweynaha Galmudug uu sheegay in doorashadu ay ka dhici doonto magaaladda Cadaado.